Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Nhamba 8 -> Yemasvomhu Signs
Yemasvomhu Signs: [Nhamba 8]
Pano apa panodiwa ungwaru. Munhu anonzwisisa ngaatsvage azive zvinorehwa nenhamba iyoyo yechikara nokuti ari kurehwa nenhamba iyoyo munhu. Nhamba yacho mazana matanhatu namakumi matanhatu nenhanhatu.
“Teerera unzwe iwe Isiraeri. Tenzi Mwari wedu ndiye Mwari oga.
Kana murume akatorana nomumwe murume akagara naye sokunge murume nomukadzi, vose zvavo vari vaviri vatoita chinhu chakaipa kwazvo, ngavaurayiwe. Rufu rwavo nderwekuzviparira.
1 VaKorinte 6:9-11
 Hamuzivisu kuti vasakarurama havawane nhaka youmambo hwaMwari. Musazvinyengedze kuti hapana unzenza navanamati vezvisiri Mwari, kana mhombwe navarume vanoita zvakaipa navamwe varume, kana mbavha, kana vano ruchiva, kana zvidhakwa kana vanyombi kana makororo vanokwanisa kupinda muumambo hwaMwari. Ndizvo zvakanga zvakaitawo vamwe venyu asi makashambidzwa mukaitwa vatsvene, mukaruramiswa muzita raTenzi Jesu Kristu uye muna Mweya waMwari wedu.
 Asi usayere chivanze chiri kunze kweTemberi, siya chakadaro, nokuti chakapiwa kune vechirudzi vachatsikatsika guta rinoera guta rinoera kwemwedzi makumi mana nemiviri. Ndichapawo simba kuzvapupu zvangu zviviri kuti zviporofite kwamazuva churu namazana maviri ana makumi matanhatu vakapfeka masaga.”
 Pakati penyu ngaparege kuva nomunhu anopisa mumoto mwana wake, mukomana kana musikana somupiro. Hapafanire kuva nomunhu anoshopera, kana anofembera nemaminimini, kana anoita un'anga hwokududzira mashura, kana munhu akaromba mishonga, kana anoita mapipi, kana kuva svikiro, kana ane shave rouroyi, kana anobvunzira kumidzimu nokuti Tenzi haambodi zvake ani naani anoita zvakaipa zvakadai. Pamusana pezviito zvinosemesa izvozvi Tenzi Mwari wenyu ari kufanokudzingirai marudzi avanhu iwayo.
2 Madzimambo 21:6
Akapisa mwana wake mukomana sechibayiro. Manase akanga apindawo mune zvokufembera namaminimini nezvoun'anga hwokududzira mashura obvunzirawo kumasvikiro nokun'anga. Akaita zvakaipa zvakanyanya kwazvo zvisingadiwi naTenzi akamuvirutsa nehasha.
Ndichaparadzazve uroyi hwamuchashandisa namaoko enyu ndigosiya usisina vanofembera namaminimini.
Batisisa zvemakona ako izvozvo nezvouroyi hwako hwakanyanya ihwohwo zvawadai kushanda nazvo kubvira pauduku hwako dzimwe nguva ungagone kubudiriraka, zvimwe ungambotyisidzirawo.
 Nokudaro vaimuteerera nokuti aivashamisa namashiripiti ake kwenguva ndefu. Asi pavakatenda Firipi paaiparidza Shoko Rakanaka nezvoumambo hwaMwari uye zita raJesu Kristu vakaombekwa, varume navakadzi. Kunyange Simoni pachake akadavira. Mushure mokunge aombekwa akaenderera mberi aina Firipi. Paakaona zviratidzo nezvishamiso zvikuru zvakaitwa zvakamukatyamadza. Vapositori vaiva kuJerusaremu pavakanzwa kuti Samaria yakanga yagamuchira Shoko raMwari vakavatumira Pita naJohani. Vakadzika vakavanamatira kuti vagashire Mweya Mutsvene nokuti Mweya Mutsvene akanga asati aburukira panaani zvake wavo; asi vakanga vangoombekwa chete muzita raTenzi Jesu. Vakaisa maoko avo pavari vakagamuchira Mweya Mutsvene. Simoni paakaona kuti Mweya waipiwa nokuiswa kwamaoko avapositori pavanhu akavapa mari achiti, “Ndipeiwo simba irori kuti munhu wose wandinenge ndaisa maoko angu paari agamuchire Mweya Mutsvene.” Asi Pita akati kwaari, “Parara nemari yako iyoyo nokuti wafunga kuti unogona kuwana chipo chaMwari nemari. Hauna nzvimbo kana mugove mune zvinhu izvi nokuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari. Saka tendeuka pauipi hwako uhu unamate kuna Tenzi kuti zvimwe pfungwa dzemwoyo wako dziregererwe nokuti ndinoona kuti mwoyo wako uzere nenduru inovava uye uri musungwa wouipi.” Simoni akapindura achiti, “Ndinamatireiwo kuna Tenzi kuitira kuti zvose zvamataura zvirege kundiwira.”
 Mwari akati, “Nyika ngaiburitse mhando nemhando dzezvinhu zvipenyu, mhando nemhando dzezvipfuwo, nedzezvinokambaira nokuzvova napasi, nedzemhuka dzesango,” zvikabva zvaita saizvozvo. Mwari akasika mhando nemhando dzemhuka dziri panyika, nemhando dzose dzezvipfuwo nedzezvinokambaira nokuzvova napasi. Mwari akaona kuti zvakanaka. Mwari akati, “Ngatiitei munhu akafanana nesu, akatodzana nesu. Ngavave noutongi hwenyika yose nohwehove dzomugungwa neshiri dzedenga nezvipfuwo nezvinokambaira nokuzvova napasi.” Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake, akavasika vari munhurume nomunhukadzi. Mwari akavakomborera achiti, “Berekanai muwande, muzadze nyika, muitonge. Ivai noutongi pamusoro pehove dzomugungwa, neshiri dzedenga, nezvinhu zvose zvipenyu zvinofamba panyika.” Mwari akati, “Chionai, ndakupai zvinomera zvose zvine mhodzi dzazvo zviri panyika, nemiti inobereka michero ine mhodzi kuti zvive chokudya chenyu. Asi ndapa zvinomera zvinyoro kumhuka dzesango neshiri dzose dzedenga, nezvinokambaira nokuzvova napasi, nezvinhu zvipenyu zvose zvinofema kuti chive chokudya chazvo,” zvikabva zvaita saizvozvo. Mwari akatarisa zvose zvaakanga aita, onei zvakanaka kwazvo. Kwakasviba kukaedza, iri rakava zuva rechitanhatu.
Hamuzivisu kuti vasakarurama havawane nhaka youmambo hwaMwari. Musazvinyengedze kuti hapana unzenza navanamati vezvisiri Mwari, kana mhombwe navarume vanoita zvakaipa navamwe varume,
Iye akanga asiri chiedza, asi akauya kuzopupurira chiedza achiti
 Pamberi pechigaro ichocho choumambo pakanga paine rinenge gungwa regirazi rakaita sezvimedu zvedombo romusarasara. Kumativi kwose kutenderedza chigaro choumambo ichocho, kwakanga kuine zvisikwa zvina zvizere maziso mberi neshure. Chisikwa chipenyu chokutanga chakanga chakaita seshumba; chisikwa chipenyu chechipiri chakanga chakaita semombe; chisikwa chipenyu chechitatu chakanga chiine uso hwemunhu chisikwa chipenyu chechina chakanga chakaita segondo rinobhururuka. Zvisikwa zvipenyu zvina zviya, chimwe nechimwe chazvo chaiva namapapiro matanhatu zvizere maziso kumativi ose mukati nokunze. Siku nesikati hazvaimbomira kuimba zvichiti: “Munoera, munoera, munoera, imi Tenzi Mwari Samasimbaose, makanga muripo, muripo, uyewo muchazovapo.”
Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi napakati pechizvarwa chake nechizvarwa chako, chizvarwa chake chichapwanya musoro wako, iwe ucharuma chitsitsinho chake.”
Chikara chakabvumirwa kutaura chikataura mazwi okuzvikudza nookushonha Mwari chakabvumirwa kutonga kwemwedzi makumi mana nemiviri.
Farao akadaidzawo magodobori ake, nyanzvi dzamapipi nen'anga. Magodobori omuIjipiti aya akabva aitawo izvozvo zvamapipi.